Larrún ट्रेन संग एक जादूगर सवारी | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | गेटवे, सप्ताहन्त
के तपाईलाई रेल मन पर्छ? संसारभरि प्रशंसकहरू छन् र एक समयमा यातायातका राजाको रूपमा ट्रेन थियो, सत्य यो हो कि धेरै देशहरूसँग रेल मार्गहरू छन्, यथार्थ सवारी हो। उदाहरण को लागी, उहाँलाई Larrún रेल.
यो एक छ फ्रेन्च ट्रेन तर यो स्पेनको सिमानाको एकदम नजीक छ, त्यसैले यदि तपाईं नाभ्रामा हुनुहुन्छ भने हुनसक्छ तपाईं यसलाई पार गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई जान्न सक्नुहुनेछ। यदि होईन भने, यहाँ तपाईंसँग यस बारे जानकारी छ cogwheel ट्रेन।
1 Larrún र आफ्नो ट्रेन
2 Larrún ट्रेन मा सवारी
Larrún र आफ्नो ट्रेन
मा पश्चिमी pyrenees त्यहाँ एउटा कुम्ब्रे बासी र "फ्रान्सेली भाषामा La Rhune मा" राम्रो बतखहरु ", Larrún भनिन्छ। छ १० मिटर अग्लो समुद्री सतह माथिको र मैले माथि भनें यो फ्रान्स र स्पेनको सिमानामा छ, सतह क्षेत्र मा.
फ्रान्सेली तर्फ, ला रन्ने २० औं शताब्दीको सुरूदेखि नै एक उत्तम पर्यटन गन्तव्य भएको छ र यो क्षेत्र हजारौं बर्षसम्म बसोबास गरिएको छ, किनकि चिहानको ढिस्को र डोल्मेन्स प्रमाणित छ। उनीहरू भन्छन कि नेपोलियन तृतीयकी श्रीमती युगेनियाले पनि पहाडको भ्रमण र भ्रमणका कारण यस ठाउँको लोकप्रियतामा सहयोग गरे।
सत्य यो हो कि अहिले हामीले देखेको सानो रेल मात्र त्यस्तो प्रकारको हो जुन फ्रान्सको यस भागमा रहेको छ, तर यसभन्दा पहिले त्यहाँ धेरै किलोमिटर ट्र्याकहरू र अन्य रेलहरू थिए जुन देशका विभिन्न भागहरूसँग सम्बन्धित थिए। Larrún ट्रेन एक र्याक रेल हो, भन्नुको मतलब, दुई रेलहरु को अतिरिक्त जो एक रेल लाईनमा सामान्य छ, यो अर्को रेल छ, दाँत रेल छ कि अन्य दुई रेल को बीच छ र त्यो एक मा सेट छ कि। गति र वागनहरूको काफिले तान्छ।
Larrún रेल यो धेरै सुन्दर काठको गाडीहरु छ त्यसोभए यो पनि संग्रहणीय ट्रेन हो जुन तपाईंलाई १ 1924 २ since देखि शिखरको शीर्षमा लग्यो।
Larrún ट्रेन मा सवारी
महारानी युजेनिया १ 1859 in मा लारिनको शीर्षमा पुगेकी छिन् र आज त्यहाँ एक मोनोलिथ छ जुन त्यस दिनको सम्झना गर्दछ। २० औं शताब्दीको सुरूमा, मानिसहरूले रेल निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकताको बारेमा कुरा गर्न थाले र १ the १२ मा यस काम सुरु भइसकेको थियो तर पहिलो विश्वयुद्धको थालनीका साथ स्थगित गरियो। १ 1912 १ In मा, युद्ध पछि, कार्यहरू जोसका साथ फेरि शुरू भयो।
अप्रिल १ 1924 २1930 मा पहिलो खण्डको उद्घाटन भयो र जूनमा शिखर सम्मेलन भएको थियो। १ XNUMX .० सम्ममा यस पहाडको जted्गल भइसकेको थियो र दोस्रो युद्धको समयमा एक रडार जडान गरिएको थियो र त्यहाँ सिपाहीहरूको सुरक्षा गर्ने सैनिकहरू थिए। दशक पछि २० औं शताब्दीको अन्तमा, यो पहिले नै स्पष्ट छ कि लारान र यसको ट्रेन यस क्षेत्रमा पर्यटक चुम्बक हो।
ट्रेन प्रयोग गर्नका लागि, तपाईले पहिले सान शहरमा पुग्नुपर्नेछ, सान जुआन डे लुजबाट १० किलोमिटर। यो एक सुन्दर शहर हो, तटबाट १ 10 किलोमिटर टाढा, प्रामाणिक रूपमा बास्क, कम सेता घरहरू १ 15 औं शताब्दीदेखि प्यरेनिजको पृष्ठभूमिको रूपमा छन्। एक सुन्दरता।
Larrún को शीर्ष रेल वा पैदल मा पुग्न सकिन्छ र तपाईं यात्रा मा यातायात को दुबै मिलन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो, तपाईं रेलमा माथि र तल हिंड्नुहुन्छ वा तपाईं ट्रेनबाट माथि तल जानुहुन्छ। जे भए पनि, यदि तपाईं पैदल माथि जान छनौट गर्नुभयो भने, तपाईं ट्रेन टिकट किन्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, दुई र आधा र तीन घण्टाको पैदल यात्रा तपाईं र वंश अलि कम पर्खिरहेको छ। यो छाया बिना र चिप्लो इलाकाको साथ हिउँद छ यदि यो वर्षा छ भने। दिमागमा राख्नु
गतिशीलता को कुरा गर्दा यो सत्य हो कि यो हिमाली क्षेत्रमा यति पुरानो ट्रेन हो व्यक्तिसँग मोटर अपा .्ग भएकाले केही हदसम्म असहज हुन सक्छ। कर्मचारी, तथापि, धेरै सहयोगी छ त्यसैले तपाईं आएर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। अशक्त मानिसहरुका लागि पार्कि of को मामला मा, छ स्थानहरु छन्, तर अधिक विचार गरिदै छ। ट्रेन भाडा पनि सस्ता छ, यद्यपि साथीहरूको लागि हैन जबसम्म तपाईंसँग कार्ड छैन जसले निर्दिष्ट गर्दछ कि अक्षम व्यक्ति एक्लो हुन सक्दैन।
रेलमा जानका लागि त्यहाँ दुई खुट्टाहरू प्रत्येक एक खुट्टाको हुन्छन्। यदि व्यक्तिले व्हीलचेयर प्रयोग गर्छ भने, यो यात्रा गर्नुपर्दा यसलाई पट्याएर कार बेन्चमा बस्नु आवश्यक छ। प्रस्थान स्टेशन मा एक बाथरूम छ कि यो पर्याप्त प्रयोग गर्न सकिन्छ कि पर्याप्त विस्तृत छ र शीर्ष मा बाथरूम संकुचित छन् र सहज छैन। उदाको रेस्टुरेन्टमा पहुँच, त्यहाँ तीन मध्ये एक, र्याम्प छ तर यदि तपाइँ अभिमुखिकरण तालिकामा जान चाहानुहुन्छ भने यो çi वा हो सिढीबाट र 60० चरणहरू छन्।
Cogwheel ट्रेन को कार्यक्रम के हो? क्षणको लागि यो भन्नु पर्छ मार्च १,, २०१ 17 सम्म ट्रेन बन्द छ, तर एक पटक प्रकार्यले यो गर्दछ प्रत्येक minutes मिनेट। ला कम मौसम यो //१ and र / / and र / / १ देखि / / ११ सम्म हो। यो बिहान :17: at० माथि जान सुरु हुन्छ र पहिलो डिसल्ट बिहान १०::3० हुन्छ। यो अन्तिम पटक अपरान्ह7मा माथि जान्छ र पछिल्लो पटक 7:२० मा तल जान्छ।
La उच्च मौसम यो //8 र //7१ को बीचमा छ र त्यसपछि यसले अलि अलि पहिले काम गर्न थाल्छ। केहि कार्यक्रमहरू थपिएका छन् यदि त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन्। यात्रा minutes 35 मिनेटको छ तर पूर्ण यात्रा को लागी दुई घण्टा लाग्छ। तपाईं आफ्नै खाना ल्याउन सक्नुहुनेछ वा माथिको माछा, एक रेस्टुरेन्ट पट्टीमा प्रस्थान स्टेशनमा वा माथिको शीर्षमा। त्यहाँ तीन तल तल छन्, पु पुलम्यान, लेस font फन्टएन्स र बोर्डा, एक क्षेत्रीय उत्पादन स्टोर।
लार्रानको शीर्षमा त्यहाँ तीन थप साइटहरू छन्: लार्रgo्गो काइलोआ, लारुung्गगेन र उदाको एटेशिया। कसरी र कहाँ टिकट किनेका छन्? खैर तपाईं तिनीहरूलाई किन्न सक्नुहुन्छ अग्रिम अनलाइन भ्रमणको दिन सम्म र तपाईंले केवल तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, टिकट कार्यालयमा लामबद्ध नगरी। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोनबाट बुक गर्नुहोस् र टिकटहरू ईमेल द्वारा पठाइन्छ वा अर्को दिनबाट बक्स अफिसमा संकलन गरिन्छ; र अन्तमा तपाईं सक्नुहुन्छ उही बक्स अफिसमा किन्नुहोस्।
वयस्कले १eयूरो दिन्छ, चार देखि बाह्र वर्षको बच्चाले १२ यूरो तिर्दछ र त्यहाँ पारिवारिक दर (दुई वयस्क र दुई बच्चाहरू) हुन्छ, 12। यूरोको लागि। यी मानहरू राउन्ड ट्रिपहरूका लागि हुन्। यदि यो एक तरिका हो भने, यो क्रमशः १,, and रeयूरोमा जान्छ। याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईं हिंड्नुहुन्छ भने, रेलबाट छुट्ने टिकटहरू केवल शीर्षमा किन्न सकिन्छ। वार्षिक पासको लागत and२ र e२ यूरो छ। भुक्तानी नगद वा क्रेडिट कार्डमा गर्न सकिन्छ।
लार्रन ट्रेनमा सवारी कसरी गर्ने?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » Larrún ट्रेन संग एक जादूगर राईड
स्कटल्याण्ड मा Urquhart महल